बागलुङमा १४ किलोको भाले ! उमेर चार महिना – Info Bazar
बागलुङमा १४ किलोको भाले ! उमेर चार महिना
पोखरा-उमेर चार महिना । भारी जीउ । हाँसको झैँ चाल । भुइँमा थचक्क बसेपछि झट्टै उठ्दैन । सुस्तरी खोर चहार्छ, चारो टिप्छ । यसरी नै एउटा ‘ब्रोइलर’ कुखुराको भालेले आफ्ना आखिरी दिनहरु काटिरहेको छ ।
“यो भाले परीक्षणका लागि लामो समय पालिएको हो”, फार्मका सञ्चालक विजय शर्माले भने, “अब यो धेरै समय यहाँ रहँदैन होला ।” ‘ब्रोइलर’ कुखुराको आयु र तौलबारे अनुभव लिन नबेची राखिएको उहाँको भनाइ छ । उक्त भालेले अहिलेसम्म छ किलोभन्दा बढी दाना खाइसकेको छ । उचित हेरचाहले भाले निरोगी छ ।
“भाले किन्नका लागि धेरैले सोधिरहनुभएको छ, वनभोज जाने या त्यस्तै समूह आए बेच्ने तयारीमा छु”, शर्माले भने । उक्त भालेलाई अहिले बेच्दा बजार मूल्य रु तीन हजार २ सय पर्छ । बागलुङ नगरपालिका–३ रातामाटास्थित ‘फार्म’मा पुग्ने जो कोही दङ्ग मानेर भाले हेर्छन् । कतिले उचाल्छन् पनि । भालेसँगै हुर्किएका दुई पोथी पनि छन्, जसको तौल आठ किलो पुगेको छ ।
शर्मा विसं २०६१ देखि कुखुरापालन व्यवसायमा छन । घर व्यवहारदेखि, बालबच्चाको पढाइसम्म सोही व्यवसायबाट धानिएको छ । ‘फार्म’मा अहिले एक हजार कुखुरा छन् । उनलाई व्यवसायमा श्रीमती गीताको दरिलो साथ छ ।
“१६ वर्ष भयो कुखुरापालनमा लागेको, रु ४५ हजारबाट शुरु गरेको लगानी अहिले रु १२ लाख बढी पुगेको छ”, गीताले भनिन । शुरुमा घरकै सानो कोठाबाट शर्मा दम्पतीले कुखुरापालन व्यवसाय शुरु गरेका थिए । अहिले आधुनिक खोर बनाएर कुखुरापालन गरिहेका छन । वर्षमा छ ‘लट’ कुखुरा तयार हुन्छन् ।
एक पटकमा झण्डै रु ६० देखि ७० हजारसम्म मुनाफा निस्कन्छ । बजार मूल्यमा आउने उतारचढावले कहिलेकाहीँ आम्दानी घटबढ हुन्छ । अहिले जिउँदो ‘ब्रोइलर’ कुखुरा प्रतिकिलो रु २ सय ३० मा बिक्री भइरहेको छ । कुखुरापालनसँगै शर्मा दम्पतीको मासु, किराना र खाजा पसल पनि छ ।
‘फ्रेस हाउस’का लागि भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बागलुङबाट गत आवमा रु एक लाख ९४ हजार अनुदान आएको थियो । त्यसमा रु तीन लाख थपेर मापदण्डअनुसारको व्यवस्थित ‘फ्रेस हाउस’ सञ्चालन गरिएको शर्माले बताए । व्यवसायमा शर्मा दम्पतीको लगाव र मेहनत देखेर गाउँले पनि छक्क पर्छन् ।
“विदेशको सपनालाई सधैँका लागि त्यागेर गाउँघरमै बसी केही गर्ने सोचका साथ अघि बढेको छु”, शर्माले भने, “परिवार र छिमेकीको पनि राम्रो साथ छ ।” शर्माले यसअघि रोजगारीका क्रममा तीन वर्ष अरबमा बिताएर फर्कएका हुन् । “अब त मैले पनि विदेश जान दिन्न, यहीँ सुखदुःख गरेर बस्ने हो”, शर्माकी श्रीमती गीताले भन्नुभयो, “ठूलो देश जाने चक्करमा न काम भयो, उल्टै दलालले पैसा खाए ।”
This Page Total Views: 1,318
पोखराको मनिपालमा चम्ल्याहा शिशुको जन्म
January 16, 2020by Info Baazaar